टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियानः खोप लगाएपछि कस्ता असर देखिन सक्छन्? कस्ता व्यक्तिले लगाउनु हुँदैन? – Health Post Nepal
टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियानः खोप लगाएपछि कस्ता असर देखिन सक्छन्? कस्ता व्यक्तिले लगाउनु हुँदैन?
२०७८ चैत १६ गते १३:०३
काठमाडौं–सरकारले यही चैत २५ देखि वैशाख १८ सम्म सरकारले पहिलोपटक टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ। यो अभियानमा १५ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई खोप दिइन्छ।
टाइफाइड अर्थात् म्यादे ज्वरो ज्यानै जोखिममा पार्नसक्ने संक्रामक रोग हो। ढल वा संक्रमित व्यक्तिको दिसामा पाइने टाइफाइड रोगको. जीवाणु स्वस्थ व्यक्तिमा दुषित खाना वा पानीको माध्यमबाट सर्दछ। यो रोग सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा लागेको पाइए पनि विशेषगरी १५ वर्षमुनिका बालबालिकामा धेरै हुने गरेको पाइएको छ।
खोप लगाएपछि कस्ता असर देखिनसक्छन्?
टाइफाइड खोप लगाएपछि अन्य खोपहरुमा जस्तै केही सामान्य (सूई लगाएको ठाउँमा रातो हुने, सुन्निने र दुख्ने, हल्का ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, हात गोडा तथा जोर्नीहरु दुख्ने आदि) असर हुनसक्छन् र यस्ता सामान्य असरहरु बिस्तारै आफैं ठीक भएर जान्छन्।
One thought on “टाइफाइडविरुद्धको खोप अभियानः खोप लगाएपछि कस्ता असर देखिन सक्छन्? कस्ता व्यक्तिले लगाउनु हुँदैन?”
Navin serpali says:
Badiya ko lagi kah sampark rakhne sir